अमेरिकाको सर्वश्रेष्ठ मोम संग्रहालय | Absolut यात्रा
मारुउजेन | | USA
तिमीलाई मन पर्र्यो मैन संग्रहालयहरु? तिनीहरू अविश्वसनीय छन्, प्रदर्शन मा प्रत्येक टुक्रा कला को एक सानो टुक्रा छ, यस्तो सही प्रजनन कि यो एक छाप को एक बिट दिन्छ। यदि तपाई सोच्नुहुन्छ कि मैडम तुसाद संग्रहालयहरु मात्र एक हो भने, म तिमीलाई भन्छु कि तिनीहरू होइनन्, कि संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै मोम संग्रहालयहरु छन्।
आज हाम्रो लेखमा हामी यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं अमेरिका मा सर्वश्रेष्ठ मोम संग्रहालयहरु, त्यसो भए लेख्नुहोस् जुन तपाईंको अर्को यात्रा को लागी तपाईंलाई रूचि।
1 मोम संग्रहालयहरु
2 संयुक्त राज्य अमेरिका मा मोम संग्रहालयहरु
3 फ्रान्कस्टेनको घर
4 जेसी जेम्स वैक्स संग्रहालय
5 हलिउड वैक्स संग्रहालय
6 महान कालो राष्ट्रिय संग्रहालय
7 कुमाले मोम संग्रहालय
8 सलेम मोम संग्रहालय
10 राष्ट्रपतिहरूको राष्ट्रिय मोम संग्रहालय
मैन पुतली को इतिहास के हो? यो सबै संगै शुरू भयो युरोपको रोयल्टीको अन्त्येष्टि घरहरू, मृत व्यक्तिको कपडामा लगाएको जीवन-आकार मोम प्रजननहरू बनाउने प्रभारी। र किन उनीहरू यी प्रजननहरू गरिरहेका थिए? को कस्टम द्वारा अन्त्येष्टि संस्कार त्यसले शवलाई शवयात्रामा ल्यायो, जुलूसमा र त्यसैले मौसम अनुकूल हुन।
त्यसपछि एक बनाउने विचार मैन पुतला, पहिले टाउको र हातहरू जुन शाही पोशाकको फैलिएको भागहरू थिए। दफन वा भोल्टेजी पछि, यी टुक्राहरू भित्र छोड्ने बानी परेको छ चर्च प्रदर्शन, जुन धेरै दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्न समाप्त भयो। र हामीलाई थाहा छ कि सबैको मूल्य थियो।
पछि, यी तथ्या for्कहरूको लागि जीवनमा प्रस्तुत गर्न पनि लोकप्रिय भयो र त्यहाँ साँचो गुरु मूर्तिकारहरू थिए जसले युरोपियन अदालतहरूमा कमिसन र पैसा स collecting्कलन गरेर यात्रा गरे। यो चलन युरोपमा शाही रत्नको बीचमा जन्मिएको थियो, तर सत्य यो हो कि लामो समयदेखि यसले समुद्रहरू पार गर्‍यो र आज अमेरिका र विश्वमा पनि संग्रहालयहरू छन्, तर केवल त्यस पछि मात्र राजस्व तर सेलिब्रेटीहरू।
संयुक्त राज्य अमेरिका मा मोम संग्रहालयहरु
संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै मोम संग्रहालयहरू छन्, केही क्यालिफोर्नियामा छन्, केही न्यूयोर्क, लस भेगास, वाशिंगटनमा छन्, र सूची जारी छ। यहाँ तपाईले केहि बाट सबै प्रकारको मोम आंकडा पाउनुहुनेछ राजस्व, जाँदैछ प्रसिद्ध संगीतकारहरू र लोकप्रिय साहित्यबाट पात्रहरू सम्म, निश्चित रूपमा, हलिउड स्टारहरू सबै समय को।
यो संग्रहालय ताल जर्ज, न्यूयोर्कमा छ, र यो त्रासको संग्रहालय हो जुन शीर्षक फ्रान्केस्टीनलाई जनाउँदछ, त्यहाँ अरू पनि छन् डरलाग्दा चलचित्र र पुस्तक पात्रहरू त्यो तपाईं डराउन सक्छ। संग्रह क्लासिक डरावना साहित्य र यस प्रकारको संग्रहालयको अधिक परम्परागत पक्षहरूमा आधारित छ, त्यसैले त्यहाँ हिंसाका केही दृश्यहरू छन् जुन केही हदसम्म बलियो हुन सक्छ।
केहि वर्णहरू चिच्याउँदछन्, केहि थोरै सर्छ र सबै डराउँछन् किनभने यो एक हो तर्साउने घर, जे भएपनि। यो संग्रहालय अझै पनि महामारीमा खुला छ तर यसका दिनहरू र घण्टा जाँच गर्न सजिलो छ किनकि सबै कुरा परिवर्तन हुन सक्छ। यस समयमा यो सप्ताहन्तमा बिहान १० देखि 10 वा साँझ open सम्म खुल्ला हुन्छ। प्रवेश वयस्क प्रति5१०.6। र १ to देखि १ ages वर्ष उमेरका बच्चाहरू र विद्यार्थीहरूको लागि $ 10,75 हो।
जेसी जेम्स एक थियो जंगली पश्चिम डाकू, पौराणिक। भनिन्छ कि उहाँ १ 1882२ मा मर्नुभयो तर संग्रहालयले उनलाई पूर्णतामा पुर्‍यायो। संग्रहालयले समावेश गर्दछ फोटो, जानकारी, पुरानो वस्तुहरूबीचमा १०० हजार भन्दा बढी जेम्स र उसको गिरोहको व्यक्तिगत सम्पत्ति, हतियार सामेल छन्।
थप रूपमा, आगन्तुकहरूले जेम्सलाई चिन्ने मानिससँग अन्तर्वार्ताको फुटेज देख्नेछन् र अवश्य पनि, त्यहाँ मोम फिगरहरू छन् जुन डाकुको घर, गृहयुद्धको समय, उसको डकैती र अन्य धेरै उत्पन्न हुन्छ। यो एक बहु-आयामी अनुभव बाँच्नको बारे हो र यो राम्रोसँग सम्पन्न भएको देखिन्छ।
यो संग्रहालय यो मेरामेक गुफाको नजिक छ र यो विश्वको सबैभन्दा प्रख्यात मार्गहरू मध्ये एक हो, मार्ग 66 it, जुन यो मिसौरी भएर जान्छ। त्यसोभए १ ca .१ मा ठूलो बाढी पछाडि प्रकाशमा आएको यी गुफामा हिंडेर यात्रा पूरा भयो। र यो गुफाहरू जेसी जेम्स गिरोहको लुक्ने ठाउँ हो जस्तो देखिन्छ।
महिनाको आधारमा संग्रहालयको विभिन्न घण्टा हुन्छ, तर ध्यान दिनुहोस् कि नोभेम्बर र मार्च बीचमा यो बन्द छ। प्रवेश वयस्क प्रति $ १० हो।
हलिउड वैक्स संग्रहालय
यो संग्रहालय Myrtle Beach, दक्षिण क्यारोलिना मा छ। यो एउटा शाखा हो र समुद्र तट र यसको मनोरञ्जनमा जानु भन्दा पहिले यो केही समयको लागि पर्याप्त मनोरन्जनात्मक हो। त्यहाँ धेरै आंकडा छन् सेलिब्रेटीहरू र केही जोम्बिजहरूसबै भन्दा पछि प्रसिद्ध व्यक्तिहरू।
प्रति वयस्क प्रवेश $ २ and र $ between० बीचमा खर्च हुन्छ, तर तपाईं खरीद गर्न सक्नुहुन्छ सबै पहुँच पास र एउटामा तीन संग्रहालयहरू भ्रमण गर्नुहोस्: हलिउड वैक्स संग्रहालय, हन्नाको मेजे अफ मिरर एन्ड आउटब्रेक, ड्रेड द अनडेड।
संग्रहालय प्रत्येक दिन बिहान9देखि साँझ from सम्म खुला रहन्छ र आजकल चिनस्ट्र्यापको प्रयोग अनिवार्य छ।
महान कालो राष्ट्रिय संग्रहालय
यो मोम संग्रहालय अवस्थित छ बाल्टीमोरमा र यो बारे मा हो संयुक्त राज्य अमेरिका मा अफ्रिकी आप्रवासी को इतिहास। यहाँ प्रदान गरिएको जानकारी प्राय: विद्यालयहरूमा पढाइदैन र धेरै शैक्षिक हुनुको साथै यो धेरै मनोरन्जनात्मक पनि हुन्छ, किनकि मोम संग्रहालयहरू झैं छन्।
त्यहाँ धेरै छ १ life० जीवन आकार मोम आंकडा र विभिन्न थिमको साथ धेरै प्रदर्शनी कोठा। एक भनिन्छ भूमिगत रेलमार्ग, Harriet Tbman र Thomas Garret को आंकडाको साथ, अर्को खण्ड भनियो उद्यमी र त्यहाँ मेडम सीजे वालेर छ, अर्को भनिन्छ महिला अधिकार र उन्मूलनवाद र यसमा रोजा पार्क वा शिर्ली चिशोलमको आंकडा छ, उदाहरणका लागि। यी सबै कालो व्यक्तिहरूको नाम हुन् जसले अमेरिकामा आफ्नो छाप छोडे।
संग्रहालय को लागी प्रसिद्ध छ जीवन एक गुलाम व्यापार जहाज को आकार र यो अवस्थितिमा हेर्न कठिन छ जुन ट्राफिक गरिएको थियो। प्रति वयस्क प्रवेश $ १ costs लागत र संग्रहालय सोमबार, बुधवार र शनिबार बिहान १० देखि साँझ 15 बजे र आइतवार दिउँसो 10 देखि साँझ open सम्म खुल्ला रहन्छ। त्यहाँ निर्देशित भ्रमणहरू छन्।
कुमाले मोम संग्रहालय
यो संग्रहालय देशको सब भन्दा पुरानो फार्मेसीमा काम गर्दछ, जसले यसलाई अधिक आकर्षण दिन्छ। अरु के छ त, यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको सब भन्दा पुरानो मैन संग्रहालय हो र त्यहाँ आकृतिहरूको एक महान विविधता छ रोमन सेन्चुरियनबाट २१ औं शताब्दीका सेलिब्रिटीहरू।
संग्रहालयका संस्थापक जर्ज पॉटर लन्डनको भ्रमणमा मोमको पुतली देखेर मोहित भए र संयुक्त राज्यमा पनि यसै गर्न चाहे तर राष्ट्रिय राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले। त्यसैले उनले फ्रान्समा सब भन्दा राम्रो मोम किने, इटालीको सबैभन्दा राम्रो कपाल र विश्वका सबै भन्दा राम्रो शिल्पकारहरूलाई भुक्तान गरे। निर्माण बेल्जियममा भयो र त्यसपछि सबै चीजहरू १ 1949। In मा संग्रहालयमा सारियो।
संग्रहालय राष्ट्रीय ऐतिहासिक जिल्ला भित्र छ, सैन अगस्टिन, देशको सब भन्दा पुरानो युरोपेली छिमेकी, ज्यादै सुन्दर ठाउँ। यो Orange१ ओरेन्ज सेन्ट हो र यो सोमबार आइतवार बिहान 31 देखि साँझ9सम्म खुल्ला हुन्छ। प्रवेश $ ११.5० को आसपास छ।
सलेम मोम संग्रहालय
यो संग्रहालय भित्र छ सलेम, म्यासाचुसेट्स। यस वर्ष यसको २th औं वार्षिकोत्सव मनाउँछ र सँगै तपाईं सलेम विच गाउँ र ट्रेल्स मेमोरियल र चार्टर स्ट्रिट ब्यरीingिंग पोइन्टको आकर्षणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै सम्बन्धित बोक्सी शिकार।
साइट सुपर पूर्ण छ किनकि स can्ग्रहालयको अतिरिक्त तपाईं सक्नुहुन्छ सडक र प्रेतित घरहरूमा रातको पैदल यात्रा लिनुहोस्। भ्रमणले भवनहरूको इतिहास, आत्माहरूको क्रियाकलाप, र बोक्सीविद्याको आरोपहरूको बारेमा छलफल गर्‍यो जुन त्यस समयमा महिलाहरूमाथि परेको थियो। पनि त्यहाँ दिन भ्रमण छ।
अवश्य पनि, यस क्षणको लागि संग्रहालय महामारीको कारण बन्द छ तर चाँडै जुलाईमा उपलब्ध हुने अक्टुबरको लागि टिकटको अनलाइन बिक्रीको उद्घाटनको घोषणा गरिनेछ। २०२० को लागि खरीद गरिएका टिकटहरू पनि मान्य हुनेछन्।
सलेममा तपाईले पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ पाइरेट संग्रहालय र ब्रिस्टल, कनेक्टिकट, मा कालकोठरी क्लासिक चलचित्र संग्रहालय, एक उत्कृष्ट गन्तव्य यदि तपाइँ डराउने फिल्महरू मन पराउनुहुन्छ, को क्लासिक को आंकडा संग ड्र्याकुला, फ्रान्केस्टीन, Nosferatu र ओपेरा को प्रेत, उदाहरणका लागि।
यो संग्रहालय हो हलिउड, क्यालिफोर्नियामा, र अहिले यो बन्द छ। यसको स several्ग्रह धेरै क्षेत्रहरूमा विभाजित गरिएको छ: आधुनिक, हलिउड स्पिरिट, पप र वेस्टर्न आइकनहरू। त्यहाँ भर्चुअल क्षेत्र पनि छ, 's ० को दशकमा समर्पित क्षेत्र, फिल्महरूको अर्को marvel 4D र जिमी किमेललाई समर्पित अर्को।
प्रवेश $ २० छ र त्यहाँ छ ११ Hollywood सेलिब्रेटीहरूको साथ हलिउड वाक अफ फेम फोटो लिन। महोदया तुसाड संग्रहालयहरू निस्सन्देह सबैभन्दा राम्रो ज्ञात हो त्यसैले तपाईले केहिहरूमा पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ शाखा कार्यालयहरु ठिक छ, त्यहाँ न्यू योर्क, लन्डन र युरोप मा र एशिया मा अन्य शहरहरु मा छन्।
राष्ट्रपतिहरूको राष्ट्रिय मोम संग्रहालय
यो मूल संग्रहालय हो दक्षिण डकोटा मा र संयुक्त राज्य अमेरिकाको president 45 राष्ट्रपति मध्ये प्रत्येकको एक सय मोम आंकडा समावेश गर्दछ। संग्रहालय हो माउन्ट रश्मोरबाट केवल पाँच मिनेट, किस्टोन शहरमा चार राष्ट्रपतिहरूको अनुहारको साथ प्रसिद्ध माउन्ट।
त्यहाँ एक अडियो गाईड छ कि तथ्या by्कहरु द्वारा प्रजनन दृश्यहरु को ऐतिहासिक प्रसंग वर्णन गर्दछ, र एक सात मिनेट को भिडियो को कलाकारहरु कसरी मोम को आंकडा को आकार दिन्छ देखाउन। त्यहाँ राष्ट्रपतिहरू, एक सय र अन्य ऐतिहासिक व्यक्तित्व को तारकहरु को मृत्यु मुखौटा पनि छन्। संग्रहालय आज खुला छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » अमेरिकामा सर्वश्रेष्ठ मैन संग्रहालयहरू
हल्याण्ड मा पेय